Shilalekha » तपाईलाई कुनै व्यवसायीको जानकारी वा लोकेशन चाहियो ? तपाईलाई कुनै व्यवसायीको जानकारी वा लोकेशन चाहियो ? – Shilalekha
तपाईलाई कुनै व्यवसायीको जानकारी वा लोकेशन चाहियो ?
ई–घर एपबाट २ सय भन्दा बढी व्यवसायीको जानकारी लिनुहोस् !
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:४४
काठमाडौं । विभिन्न साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायको जानकारी र लोकेशनका थाहा पाउनका लागि ई–घर एप सार्वजनिक भएको छ ।
मरिन इन्जिनियरिङ सुलुसन प्रालिले व्यवसायी तथा सेवाका लागि ई–घर एप सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नेपालमा छरिएर रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई एउटै एन्ड्रोइ एपभित्र समावेश गरि व्यवसायी तथा नागरिकले ई घर एप एन्ड्रोइट मोबाइलबाट गुगल प्ले स्टोरबाट https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slantedlines.eghar&fbclid=IwAR0npA4IvTIkl5tuRSsaWinkW–lpt3w6oq08IxIt5pioB5wHl8Hy0EMc4Q डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सम्ने छन् ।
२ सय भन्दा बढी विभिन्न किसिमका व्यवसायको जानकारी र सेवा गराउने एपले ५० हजार व्यवसायीहरुलाई एउटै एप भित्र समेट्ने प्रयास गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
व्यवसायको किसिम हेरी २ सय देखि १००० सम्म दर्ता शुल्क व्यवसायीका लागी तोकिएको छ भने प्रयोग कर्ताले आवश्यक सामग्री, सर्भिस र समस्या अनुरुप आफ्नो लोकेशन वरपरका व्यवसायी सँग सिधा एप मार्फत सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
रजिस्ट्रेशन अफर मा प्रत्येक क्याटोगोरीका प्रथम दुई रजिस्ट्रेशनलाई गोल्डेन क्लाईन्ट्ले सम्मान र बिशेष अफर प्रदान गरिनेछ भने बाँकी तीनलाई सिलभर क्लाईन्ट्ले सम्मान र बिशेष अफर प्रदान गरिनेछ । साथै रजिस्ट्रेशन अफर भरी ररजिस्ट्रेशन गर्नु हुनेलाई १५% क्यास ब्याक दिने घोषना पनि गरीएको जनाइएको छ ।
कम्पनिले आफ्नो व्यवसाय थप गर्न चाहेमावा केहि समस्या रहेमा ९८६०८४३८२६र ९८०३१०३७९९∕९८५११९८६९९ मा त्यसैगरी भाइरमाा गरि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । व्यवसायीले अब नेपालमा विज्ञापनका निम्ति लाखौं खर्च गर्न नपर्ने र व्यवसायी लाई प्रयोगकर्ता माझ सहजै जोड्ने प्रत्तिवद्धता कम्पनीले जनाएको छ ।
व्यवसायीक मात्र नभई सेवा भावले चलेको जनाउँदै प्रहरि सम्पर्क स्थान, एम्बुलेन्स सेवा लगायतसम्पर्क न. विना रजिष्ट्रेशन एप मा उपलब्ध गराउने घोषण पनि कम्पनीको रहेको छ ।